नारायण हिटी दरबार संङ्ग्रहालयमा राखिएको श्रीपेच निकाल्न खोज्ने एक जनालाई नेपाली सेनाले निय’न्त्रणमा लिएको छ ।
शुक्रबार, अशोज ८, २०७८ ६:४५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नारायण हिटी दरबार संङ्ग्रहालयमा राखिएको श्रीपेच निकाल्न खोज्ने एक जनालाई नेपाली सेनाले निय’न्त्रणमा लिएको छ । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
सुर’क्षामा खटिएका नेपाली सेनाले उनलाई प’क्रा उ गरेको हो । नारायणहिटी सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले श्रीपेच निकाल्न खोज्ने व्यक्तिलाई निर्यन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए।
शुक्रबार बिहान अवलोकन गर्ने पुगेका पश्चिम रुकुम मसिकोट ११ का खिमबहादुर घर्तीले सिसा फुटाएर श्रीपेच निकाल्ने प्रयास गरेका थिए । सिसा फु’टाउँदा उनको हात समेत का’टिएको छ। उनका अनुसार श्रीपेच मा ५ जना सुरक्षा कर्मी, बाहिरी घेरा, सिसाको घेरा र सेन्सर जडित सुरक्षा भएकाले जो कोहिले हात हाल्न सक्दैनन् ।
संग्रहालयले प’क्रा उ परेका घर्तीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी थप अनुसन्धानका लागि महानरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा बुझाएको प्रवक्ता गुरुङले बताए । ‘उद्देश्य के थियो ? किन हात हाल्यो ?
योजना के थियो भन्ने विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्दैछ,’ प्रवक्ता गुरुङले लोकान्तरसँग भने । सिसा फु’टाउँदा उनको हातमा चो’ट लागेको छ । उनी बिहान १० बजे टिकट काटेर २ ठाउँमा सुरक्षा जाँचपछि संग्रहालय छिरेका थिए ।